Yiba umSamariya Ogaxekile!
NgoMsombuluko, Mashi 15, 2010 NgoMgqibelo, Juni 27, 2015 UBill Dawson
Abakwa-Spam Samaritans abagcini nje ngokusebenzisa ama-akhawunti abo e-imeyili ukuxhumana, kepha futhi banikela ekuqedeni ogaxekile kwabanye. Ngempelasonto edlule umamazala wami wayechaza ukuthi umlahla kanjani uYahoo! i-akhawunti ye-imeyili futhi yathuthela ku-Gmail, ngoba yayiyi, “yonke igcwele i-SPAM futhi ayikwazanga ukufundwa.” Lokho angazange akuqaphele ukuthi lokhu kuziphatha kulimaza abahlinzeki be-Intanethi (ISPs), abathengisi nabagaxekile ngokufanayo.
Abahlinzeki Bezinsizakalo ze-Intanethi (ISPs) udinga impendulo ukuze uthuthukise ulwazi lwakho lwe-imeyili. Ngaphandle kwabasebenzisi bokufaka izikhalazo nokumaka i-imeyili njengogaxekile, I-ISP awunakho okokufaka ukuvikela abasebenzisi ekuhlukunyezweni.
Abaningi I-ISP baqala umkhuba wokuletha imiyalezo kufolda yogaxekile / yenqwaba nokuqapha uma abasebenzisi bayilungisa. Ngaphandle kokungenelela komsebenzisi, abathengisi be-imeyili baqala ukuba nezinkinga ngedumela, okuphazamisa ukulethwa kwabo.
Amakheli e-imeyili alahliwe awasuswa, amaningi I-ISP izobuyisa i-akhawunti futhi iyisebenzise njengogibe logaxekile ukuze isuse abathumeli abahlaselayo. Lokhu kubeka engcupheni abathengisi abasemthethweni abaqhubeka nokuthumela ama-imeyili, ngoba abazi ukuthi i-akhawunti ilahliwe.
Abathengisi izosebenzisa ukuhlolwa kwe-A / B, ivule, ichofoze futhi iguqule ukucwenga imiyalezo yayo futhi ithuthukise ukubandakanyeka komsebenzisi. Noma ukhetha ukuzikhipha ohlwini lwemilayezo yabo, abathengisi ufuna, futhi kudingeka ukuxhumana.
Ugaxekile ngifuna nje ukuthumela imiyalezo! Abanandaba ukuthi ngabe lishaya ibhokisi lakho lokungenayo noma ifolda yogaxekile / yenqwaba. Ngokuziba ukuhlaselwa kwemilayezo engadingeki, bathola abakufunayo. Abasebenzisi bangalungisa kuphela inkinga ngokumaka le milayezo njenge ugaxekile, nokuxwayisa ama-ISP ngodaba.
Isimilo sale ndaba sichitha imizuzu embalwa ukubuyekeza ogaxekile abahle nababi kusiza ukwenza i-imeyili ibe ngcono kuwe nakwabanye abasebenzisi. Ungawanaki lawo ma-imeyili avela kogaxekile noma abakhangisi. Ngokuzikhipha ohlwini, ukumaka i-imeyili njengogaxekile, noma ukususa i-imeyili kufolda yenqwaba / yogaxekile, uthuthukisa ulwazi lwe-imeyili lwawo wonke umuntu.
Siza umkhwekazi wami aphume, futhi wenze umhlaba we-imeyili ube indawo engcono… Yiba ngumsamariya ogaxekile!
Tags: Ukuhlolwa Komkhiqizoikhathalophuimisingaizibalo ze-imeyili zeselulazokuthuthukisa umkhiqizorepinsabezindabainhlolovo ye-swipp
UBill Dawson unguchwepheshe wokumaketha kanye nokufaka isicelo se-imeyili, ebonisana nezinkampani ezinkulu zombili kanye nesoftware njengabahlinzeki bezinsizakalo ekuhlanganisweni kwabo kwe-imeyili, ukusebenziseka kanye nokulethwa. UBill usebenze nezinye zezinhlangano ezinkulu kakhulu online, kufaka phakathi Zappos futhi Walmart. Yena nomkakhe, uCarla, bangabanikazi futhi basebenzela inkampani yabo, 4 Izinja Design.
Ungavumeli Umkhankaso Wakho Wokuvuza Ube Ukuhlushwa Kwamanzi AmaShayina
Mar 19, 2010 ku-1: 05 PM
Ukumaketha nge-imeyili sekungenye yezindlela ezisetshenziswa kakhulu zokumaketha online, okuholela ekutheni kube enye yezindlela eziphumelela kakhulu kwezamabhizinisi. Ugaxekile uvamile manje futhi uzoqhubeka nokwenzeka.
Okufanele abanini bamabhizinisi bazi ukuthi ukugaxekile kuzobhubhisa ama-brand abo esikhathini esifushane, kube yilokhu okungenamsebenzi futhi kunganikeli ngemiphumela engako kunohla lokungena.